हरेक मानिस खुसी चाहन्छन् । जीवनमा कही न कतै खुसीको खोजिमा रहेको हुन्छ मानिस । खुसीको लागि मानिस जे गर्न पनि तयार हुन्छ । त्यसमा उसले आफ्नो खुसी खोजिरहेको हुन्छ । त्यसैले पनि खुसीलाई जीवन जीउनुको लक्ष्य भनिन्छ । जीवनको जुन बाटोमा खुसी छैन त्यो बाटोमा मानिस धेरैबेर सम्म रहन सक्तैन् । जीवन निरश हुन्छ । खुसीको पल जीवन खिलखिलाउछ । जीवनमा नयाँ उमंग आउछ । यसकारण शक्तिसाली र प्रेरित बन्नका लागि व्यक्ति सधै खुसी रहन जरुरी छ ।
मानिस जव खुसी रहन्छ तब मन भित्रैबाट हल्का र सहज महसुस गर्छ । तर मनमा तनाव भयो भने उसको अनुहारको भावमा नै त्यो पीडा झल्किन्छ । मनमा अनेक तरहका विचार आउने, नकारात्मक हावी हुने तथा व्यक्ति आफ्नो भविष्यको लागि चिंता गर्न थाल्छ । दुर्घटनाको शंका गर्छ । यस्तो दृश्यको कल्पना गर्न थाल्छ की, जसले उसको हानि पु¥याउने काम गर्न थाल्छ । यस्तो अवस्थामा उसले यो पनि सोच्न सक्तैन की, उसको जीवनमा कुनै राम्रो काम पनि हुन सक्छ ।
जब मनमा खुसी हुन्छ, मन प्रशन्न हुन्छ अनि सकारात्मक कुरा उसको जीवनमा हावी हुन्छ । यस्तो समयमा उसको विचार रचनात्मक हुन्छ । जीवनमा इन्द्रधनुषीय आभास हुने तथा जीवनको नयाँ आयाम र परिदृश्यको खोजीमा लागिरहेको हुन्छ ।
हाम्रो जीवनमा अगाडि बढ्नका लागि खुसीले एउटा इन्जिनको काम गरिदिन्छ । यदि हामीले आफ्नो जीवनमा खुसी रहने तथा जे छ, त्यसैमा सन्तुष्ट रहने बानी गर्यौ भने हाम्रो मानसिक समस्याहरु हामीबाट टाढा हुन्छन् । जीवनमा कसरी खुसी रहने ? कसरी खुसी बढाउने भन्ने बारेमा हामीले जीवनका ती शुत्रहरु जान्न तथा अपनाउन जरुरी छ । जुन हामीभित्रै छ तर हामी त्यसबाट अनभिज्ञ छौं ।
हामी जुन वातावरणमा रहन्छौं प्रकृतिले त्यसमा भरपुर कला र सुन्दरता भरिदिएको हुन्छ । तर, आफ्नो समस्याका कारण हामी यसलाई देख्न सक्तैनौं । त्यसलाई महसुस गर्न पनि पाउँदैनौं । त्यो मानिस जीवनमा अत्यन्त खुसी रहन्छ जसको जीवनको उद्धेश्य स्पष्ट हुन्छ । ती मानिसलाई यो ज्ञान हुन्छ की, उनीहरु आफ्नो उद्धेश्यमा अगाडि बढीरहेका हुन्छन् । उनीहरु आफ्नो लक्ष्य, गन्तव्यतर्फ लागिरहन्छन् । उनीहरुको खुसी निरन्तर बढी रहन्छ । यस्ता व्यक्तिहरुमा चिडचिडापन, चिन्ता, तनाव, बेचैनी जस्ता मानसिक समस्या एकदमै कम हुन्छ ।
तर, जुन व्यक्तिलाई आफ्नो उद्धेश्यको बारेमा थाहा हुँदैन, उनीहरुको जीवनमा अनिश्चितता हुन्छ । असन्तुष्टि हुन्छ अनि उनीहरुलाई नै थाहा हुँदैन कहाँ गइरहेको छु ? के प्राप्त गरिरहेको छु ? यसकारण जीवनको उद्धेश्यपूर्ण बनाउनु नै खुसी हासिल गर्नु हो ।
जीवनमा सिक्नका लागि धेरै कुरा छन् । जीवनमा धेरै कुरा यस्ता छन जुन हामी जान्दैनौं तर त्यस्ता कुराहरु हाम्रो जीवनका लागि जरुरी छन् । लाभदायक छन् । जुन कुराहरु सिकेर अनि जानेर जीवनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउने र हाम्रो योग्यताको वृद्धि गराउँदै लैजान्छ । जीवनमा धेरैपटक यस्तो परिस्थितिहरु हाम्रो सामु आउछन, जसमा हामी सफल हुन सक्तैनौं । जीवनमा धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने र धोका खानुपर्ने पस्थिति पनि आउछनु । तर, संघर्ष गरेर अगाडि बढ्नका लागि मनमा उत्साहका साथ उठ्न नै सर्वश्रेष्ठ मानिसको पहिचान हो । त्यहि मानिस खुसी रहन्छ अनि सफल पनि हुन्छ जो स्वयमलाई तल झनै दिदैंन् ।
कहिलेकाँही तल झरिहाले पनि स्वंयमलाई सम्हाल्दै अरुलाईं पनि सहारा दिन्छन् ।
हाम्रो शरिर र मनको सम्बन्ध एक अर्कामा जोडिएका छन् । एकअर्कामा आश्रित छन् । यदि शरिर स्वस्थ्य छ भने मन पनि स्वस्थ्य हुन्छ । यदि शरिर अस्वस्थ छ भने मनमा चिडचिडापन आउछ । मनमा अशान्ति छाउछ र शरिरमा समस्याको प्रभाव बढ्छ । उसको शारीरिक क्रियाकलापमा अन्तर हुने र यसले विमारी बढाउछ ।
तर, यदि मन स्वस्थ्य र प्रशन्न छ भने शरिरको बिमारी लामो समय टिक्दैन । शरिरको स्वास्थ्य लाभ छिटो हुन्छ । यसकारण पनि खुसी रहनका लागि हाम्रो शरीर र मन स्वस्थ्य हुन जरुरी छ । अर्को कुरा अन्य व्यक्तिसँग जोडिने, लगाव राख्ने तथा अपनत्व बढाउनाले धेरै खुसी दिन्छ । सम्बन्ध बन्दै जान्छन् र ती सम्बन्धलाई राम्रोसँग निभाउनु जरुरी हुन्छ । जुन मानिस अरुसँग सहज रहन्छन्, अपनत्व जोड्छन उनीहरु सधै खुसी रहन्छन ।
खुसी मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । यसलाई कसैले लैजान सक्तैन् । त्यसैले आफैमा खुसी रहनुहोस् । जीवनलाई सहज र सुन्दर बनाउँदै लैजानुहोस् । जे छ त्यसैमा खुसी रहनुहोस् ।